Drafipandrosoana kaominina Ampitatafika - Madagascar Informations
24 août 2017 25 août 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Manana ny drafim –pampandrosoana sy drafi-panajariana mazava ny kaomina eto Ampitatafika ,izany dia mba ahafahana manitatra ny Tanana sy ahafahana manana Tanana vaovao ihany koa .
Ho tanterahina ao anatiny 15 taona ny tetik’asa PUDE rehefa avy nankatoaviny ny filan-kevitriny Minisitra ka hiarahana miasa akaiky amin’ny Ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny fanapariaham-pahefana eo amin’ny lafiny ara-teknika .
Marihina fa tetik’asa tsy miankina amin’ny fanjakana izao ho tanterahina eto amin’ny kaomina Ampitatafika izao .
Tanjona ny tsy ahatototra an’Antananarivo ary mbola hisy ny fanitarana ho ezahina ho atao eto amin’ny kaomina amin’ny alalan’ny fananganana hopitaly sy toeram-pivarotana lehibe na Grande surface .
Fa anisan’ny nandray fitenenana sy nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivony Ministeran’ny fanajariana ny tany ny fanapariham-pahefana ka nanambarany fa raha tsy misy paik’ady sy hazakazaka lavitr’ezaka ho amin’ny fanatanterahana ny fampandrosoana mirindra dia hitombo avo roa heny ny isany mponina ao anatiny 15 taona ary hitombo avo 10 heny ihany koa ny olana ara-tsosialy .
← Des projets de développement économique pour Madagascar
Hamoaka ny Malagasy ao anaty fahantrana ny Pastora Mailhol →
Mila miverina sy mibebaka amin Andriamanitra isika
19 juin 2017 Madagascar Informations 0
Présentation de l’autobus témoin pour améliorer les transports publics à Madagascar
17 février 2017 Madagascar Informations 0